Barcelona oo indhaha ku haysa soo xero galinta Sadio Mané – Gool FM
Barcelona oo indhaha ku haysa soo xero galinta Sadio Mané
(Barcelona) 10 Maajo 2022. Barcelona ayaa qorsheysay inay la soo wareegto xiddiga reer Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mané, si ay ugu xoojisato weerarkeeda xagaaga soo aadan.
Qandaraaska 30 jirkan ee kooxda Liverpool ayaa dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda, iyada oo wali labada dhinac gaarin heshiis uu ku cusbooneysiinayo qandaraaskiisa, waxayna u badan tahay in la iibiyo xagaaga 2022.
Sida laga soo xigtay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain, Barcelona ayaa mudnaanta koowaad siineysa inay xoojiso booska weerarka tooska ah, iyada oo sameysatay dhowr dookh ah, waxayna qorsheeneysaa soo xero galinta ciyaaryahan samayn kara farqi.
Wargeysku waxa uu tilmaamay in weeraryahanka reer Norway, Erling Haaland, ee Borussia Dortmund, uu ahaa mudnaanta maamulka Barcelona, kaasoo hadda la sheegay inuu heshiis la gaaray Man City, isla markaana tijaabada caafimaadka ugu maray dalka Belgiam.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan, in dookha labaad uu yahay xiddiga kooxda Bayern Munich ee Robert Lewandowski, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda, laakiin kooxdiisa ayaan soo dhawaynayn inay iibiso.
Sidookale waxaa dookhyada iyo qorshaha kooxda Barcelona qeyb ka ah xiddiga reer Massar iyo naadiga Liverpool ee Mohamed Salah, kaasoo qaab ciyaareedkiisa uu aad ula dhacsan yahay tababaraha Barca ee Xavi Hernández, laakiin wuxuu dalbanayaa mushaar aad u badan.
Wargeyska Mundo Deportivo ayaa tilmaamay in Barcelona ay hadda ku fikireyso inay u weecato doorashada Sadio Mane, kaasoo doorbidaya inuu u dhaqaaqo horyaalka La Liga oo uu u ciyaaro Barcelona, ​​hadii uu ka tago Liverpool.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in haddii uu Mane ku biro horyaalka Spain uu fursad weyn u heli doono inuu ku guuleysto abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican qaaradda Afrika sanad walba, sidoo kalena uu u tartami doono abaalmarinta Ballon d’Or.
Saacadihii lasoo dhaafay, magaca Sadio Mane ayaa sidoo kale lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo Bayern Munich, kaddib markii madaxda kooxda Bavarian-ka ay kulan la yeesheen wakiiladiisa Isbuucii hore.